XOG XASAASI AH: Saciid Deni oo isagoo carreysan la xiriiray Kheyre, kana dalbaday sharraxaad
May 19, 2019 muqdisho Puntland, Somalia, Wararka Maanta 10
Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa si aad ah uga carrooday hadalkii kasoo baxay wasiirka waxbarashada Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre ee ku aadanaa imtixaanaadka dugsiyada Puntland, sida ay ilo-wareedyo lagu kalsoon yahay inoo sheegeen.
Cabdulaahi Goodax Bare ayaa sheegay in uu fashilmay Imtixaankii Puntland oo shalay si rasmi ah loo daahfuray, isaga oo yiri “Imtixaan waa fashilmaa, saacadaan la joogo Puntland imtixaan ay qaadeysay wuu fashilmay.”
Deni ayaa sida la sheegay hadalka Goodax u arkay mid ku talo-gal loogu dhaawacayo imtixaanka Puntand, maadaama Puntland kaga guuleysatay Goodax dooddii horey u dhex-martay labada dhinac, kadib markii Puntland diiday inay qeyb ka noqoto Imtixaanaadka wasaaradda waxabarshada Soomaaliya.
Puntland oo markii horey ku dooday inaysan aamini karin hanaanka dowladda Soomaaliya ayaa warkeedu rumoobay markii uu fashiilmay imtixaankii dowladda oo suuqyada laga helay, waxaana hadalka Goodax loo arkay mid lagu xumeynayo Puntland.
AMAR DOWLO MUDIIC. Wasiir Goodax waxaan leeyahay, Dawlad laguma dhiso miic-miic & baryo. HADDAAD daacad tahay howshaada wado ISKANA dhega tir ciddi rabta inay waddada toosan kaa leexiso. WBT
Dhabayco… maamada fedraalka, amarka dawlada qaata.
Horaa loo yidhi ciirtaada dhamaa ceebahaaga yaqaanna. Bal idinku u fiirsada cayaar-masaxeedka halista ah ee ay siyaasiyiinta Hawiyuhu madaxweyneyaasha Puntland ee Majeerteen ku dheelaan intii ay jirtay ba.
Kol ba hadal yar oo xanaf leh ayay Xamar iyo Koonfur kaga soo shiidaan mise mararka kale boodh yar bay kaga kiciyaan iyaga oo ujeeddo qotodheer ka leh. Waa mar ay ka nixiyaan iyo mar ay ka xanaajiyaan si ay ama degdeg diyaarad ugu saaraan mise Villa Garoowe degdeg ugu shiriyaan.
Waxaas oo dhan waxay madaxdan Hawiye ka tahay nimankan Majeerteen mar ba laab-la-kac ku sameeya si ay uga mashquulaan hawlaha horumarinta Puntland inta ay Galmudug iyo Koonfurtu Puntland heerkeeda soo gaarayaan.
Madaxda Majeerteen na waa sida loo bartay oo waa kuwaas dhulkoodii inta laga ba jeediyay dhankaa iyo koonfur ama dhegta ama hanqalka u taagaya. Alla maxaa meel lagu hubsaday reer tolkayo! Bal may ka waantoobaan oo ka caqliyeystaan?
Mar ba waa mawjab cusub iyo shiid hor leh.
aa lagaa baray
Oo lagaa badi,
Koofur iyo MUQDISHO siyaasad Hawiye caydiid ayaa ugu horeeyay uguna damheeyay
Ee majeerteen dabinnadii uu dhigi jiray isagu haka dabaasho waxba yaanu Hawiye kurafane
Dadka komentiga DAR ALLA & Wanaaga u dhiibata waa yaryihiin INTA, kale waa reer nacayb & reer hebel iska riix. HADDA waxaan la yaabay sida wasiir Goodax loogu shamuumay iyo Gunnimada reer Hirshabeele oon dood ka celin. Aaway Dabshid mise musabidaadu ku fiicanyahay?. WBT
Xayawaanka Dameerka marka xaquuqda bani’aadamka la siiyo waa tanoo kale!! Goodax iyo Hawiye waa Xayawaan dad isu qaba
Mabruka qabiilkaaga halkaa kusoo qor waana laguu jawabyaa! Waa hadaad damiir iyo dadnimo leedahay,, hadii kle haween iska neefsaday baad tahay
Marka aad magac yeelato ayaan ku wasayaa.. inta ka horaysa maya
Mabruka yusuf daciif aan isku kalsoonayn inuu dad maagana raba hhhhhhhhhhhh
Bilaa magacbay ku hadleyaan, hadana cid bay ku sheegayaan bilaa damiir oo ay qoladooda doonayaan iney khasab ku sheegaan. Naw.
Waa aduunyo gadoontay. Horta adiga ama idinku yaa tihiin?